TOKO 10 Zig Ziglar Quotes Ho an'ny 2020 - Quotes Pedia
15 isa sy teny nolazainy
Zig Ziglar dia mpanoratra, mpiteny motivational ary koa mpivarotra. Eny, malaza amin'ny lahateny mandrisika izy, izay manampy ny olona handalo ny fotoan-tsarotra. Ary miaraka amin'ny herin'ny lahateniny, manome aingam-panahy olona marobe izy mba hiasa mafy eo amin'ny fiainany.
Ho fanampin'izany, anisan'ireo olona nampiditra ny fahatsaran'ny Kristianisma tamin'ny lahateniny izy. Eny, izy koa no tompon'andraikitra amin'ny fanoratana ny maro inspirational quotes, izay manampy ny olona handroso amin'ny fiainany.
Ankoatr'izay, olo-politika politika fanta-daza izy, izay nanompo ny Repoblikana tany Amerika. Mampalahelo tokoa isika satria tsy eo amintsika intsony. Nefa ny fampianarany dia manome aingam-panahy hatrany mandraka ankehitriny.
Iray amin'ireo malaza indrindra Zig Ziglar dia nanonona fa tsy maintsy fantatrao ny: "Raha mianatra amin'ny faharesena ianao dia tsy tena very." Eny, somary mora nefa misy fiantraikany mahatsikaiky izay ho fantatrao. Ity teny nindramina ity dia manoro hevitra anao hahatonga anao ny hadisoanao ho fitaovana fahombiazana.
Eny, raha mianatra amin'ny faharesena ianao dia tsy heverinao fa faharesena tanteraka. Izy io dia hanome anao fahitana mahasoa izay azonao atao mba hisorohana ny hadisoana amin'ny ho avy.
hafa Zig Ziglar izay manosika anao dia ny, “Tsy fahombiazana ny fahombiazana; dia lalana. ” Ity fanamarihana ity dia manazava ny zava-dehibe fa ny dia mankany amin'ny halehanao dia zava-dehibe kokoa noho ny toerana iainanao satria hianaranao ny zavatra ilaina rehetra amin'ny fiainanao amin'ny dianao.
Noho izany, ny zavatra tsara indrindra ho anao dia ny mihohoka amin'ny fitiavana. Raha tsy izany, dia hamoy ny tena fototry ny fiainana ianao raha tonga amin'ny alehanao. Tsy hanana zavatra hafa azonao atao ianao raha vao tratranao ny tanjonao. Fa, raha tianao amin'ny dingana, dia ho tonga ny antony manosika anao hiverimberina indray.
Zig Ziglar dia nanoratra andinin-teny maro, izay azonao tadiavina. Mandalo amin'ireny Hanampy anao hitoetra ho mazoto amin'ny fiainana hatrany ny teny nindramina.
Mamoaka ny traikefa isan-karazany ny fiainana. Tsy azontsika foana ny antony ambadiky ny zava-nitranga rehetra. Fa ...
Ny fisainana miabo dia mamela anao hanao ny zava-drehetra tsara kokoa noho ny fisainana ratsy. - Zig Ziglar
Tsy mila mihatsara be ianao vao manomboka, fa tsy maintsy manomboka ho lehibe ianao. - Zig Ziglar
Tsy misy olona (anisan'izany ianao) manonofy ho ambany sy tsy tsara. Mahazo mandry mora foana ianao…
Aza avela ny hadisoana sy ny fahadisoam-panantenan'ny taloha ary hitarika ny hoavinao. - Zig Ziglar
Matetika ny olona dia milaza fa ny antony manosika dia tsy maharitra. Eny, na ny fandroana - izany no mahatonga anay manoro azy isan'andro. - Zig Ziglar
Matetika ny olona dia milaza fa ny antony manosika dia tsy maharitra. Eny, na ny fandroana - izany no mahatonga anay manoro azy isan'andro.…